US NAVY: Mmiri ị drinkụ mmanya na Hawaii ka mmanụ ọkụ mebie ya?
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii » US NAVY: Mmiri ị drinkụ mmanya na Hawaii ka mmanụ ọkụ mebie ya?
Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii • News • Akwụkwọ akụkọ USA
Ebe nchekwa nchekwa mmanụ ọkụ Red Hill dị na Island nke Oahu, nke a maara dị ka ụlọ ọrụ Navy Red Hill wuru na mbido 1940s n'oge Agha IIwa nke Abụọ. Ọ bụ nnukwu tankị mmanụ dị n'okpuru ala 20, yana netwọk nke pipeline na-ebuga mmanụ ọkụ na Pearl Harbor, n'etiti ebe ndị ọzọ.
Ụlọ ọrụ a ọ na-achọ ịgbanye mmanụ ụgbọala n'ime mmiri ọṅụṅụ nke agwaetiti ahụ?
Ndị agha mmiri US na steeti Hawaii nwere nsogbu.
Onye na-ekwu okwu gwara Ngalaba Ahụike Hawaii na Septemba na ndị ọrụ ụgbọ mmiri nyere akaebe ụgha ma gbochie ozi gbasara corrosion n'ụlọ ọrụ mmanụ Red Hill dị na Oahu.
Dị ka otu akụkọ na Civil Beat si kwuo, mgbasa ozi nke dabeere na Hawaii nwere ike inwe nsogbu na ịnye mmiri ọṅụṅụ dị ọcha na Honolulu.
Nrụrụ aka nwere ike itinye ihe owuwu a n'ihe egwu ịgbanye mmanụ n'ime mmiri nke agwaetiti ahụ.
N'iburu n'uche ozi ahụ, ngalaba ahụ rịọrọ onye isi ahụike Libby Char ka ọ mepegharị usoro iwu nke ga-enyere aka ikpebi akara aka nke akụrụngwa a merela agadi.
Onye na-ekwuchitere ndị agha mmiri kwuru eTurboNews enweghị mgbapu ma ọnọdụ ahụ kwụsiri ike n'oge a.
Ọ zoro aka na ibe weebụ US NAVY: https://cnic.navy.mil/regions/cnrh/om/red-hill-tank.html
Edaala ibe a ma kwenye na nke a, mana ọ nweghị ihe ọzọ enyere.
Ọtụtụ mmanụ ọkụ na-agbapụta n'ime ọtụtụ iri afọ kemgbe nrụnye ya akpatala nchegbu dị ukwuu n'etiti ndị bi na ndị na-akwado gburugburu ebe obibi na-atụ egwu mmiri ọñụñụ dị n'okpuru tankị ahụ nwere ike iji mmanụ merụọ nsí.
Nke a nwere ike itinye nchekwa nke ndị bi na ndị ọbịa na mpaghara Honolulu n'ihe egwu.
Amalitere ikpe ikpe a na-ese okwu mgbe Sierra Club nke Hawaii na Board of Water Supply Honolulu jụrụ na ngwa ndị agha mmiri 2019 maka ikike ọrụ. Emere ikpe n'isi mbido Febụwarị ma meghee ya na Julaị ka mwepụta mmanụ sitere na ọkpọkọ gbawara n'otu n'ime ọwara ala dị n'ime ụlọ ahụ.
Na Sept. 16, onye ọrụ ụgbọ mmiri na-eme ihe dị ka onye nkwuwa okwu gwara ụlọ ọrụ DOH Hazard Evaluation and Emergency Response Office na e nyefela akaebe na-ezighi ezi, na ndị agha mmiri ejirila ozi dị mkpa na-ezighi ezi na-egbochi ya n'okwu ikpe ahụ.
Ọfịs Ọfịs Attorney General nke Hawaii gbara onye nta akụkọ ndị agha mmiri a ajụjụ ọnụ na Ọktọba, ndetu ahụ kwuru.
Onye ahụ kọrọ na ekpughere steeti ahụ n'uju nke sistemu nchekwa tankị n'okpuru ala, gụnyere pipeline, na ngwa ikike nke ndị agha mmiri, na ejidere ozi gbasara akụkọ ihe mere eme corrosion na-ezighi ezi, dịka ndetu ahụ siri kwuo.
eTurboNews ruru Gọvanọ, Lt. Gọvanọ, na onye isi obodo Honolulu na-anataghị nzaghachi.